थाहा पाउनुहोस् ! स्वास्थ्यका लागि उपयोगी हर्रो र बर्रोका गुण – सुदूरखबर डटकम
थाहा पाउनुहोस् ! स्वास्थ्यका लागि उपयोगी हर्रो र बर्रोका गुण
label सुदूर खबर संवाददाता query_builder September, 11 2019
हर्रो र बर्रो आयुर्वेदिक औषधिका लागि प्रयोग हुने फल हुन् । यी दुई फरक वनस्पति हुन् । हर्रो नेपालको मध्य तथा पश्चिमी क्षेत्रमा करिब एक सय ५० देखि ११ सय मिटरको उचाइमा पाइन्छ । त्यस्तै, बर्रो ११ सय मिटर उचाइमा रहेको तराई तथा भित्री मधेसका जंगलमा पाइने गर्छ । वैशाख–जेठमा फुल्ने हर्रो–बर्रो पतझर बिरुवामध्येमा पर्छन् ।
हर्रो कमलपित्तका रोगीका लागि फाइदाजनक मानिन्छ । करेलाको रसमा हर्रोको धुलो हालेर नियमित खाँदा जन्डिस निको हुन्छ ।
कागतीको रसमा हर्रो मिसाएर छालामा लगाउँदा दाद निको हुन्छ ।
हर्रोको सानो टुक्रा मुखमा चपाएर राख्दा त्यहाँभित्र आउने घाउ, खटिरा आदि निको हुन्छ । यो खाएमा भोक नलाग्ने समस्याबाट समेत राहत मिल्छ ।
नियमित हर्रो खाएमा पेट सफा हुने, एसिडिटी बढ्ने, पेटमा ग्यास भरिने र कब्जियत हुने समस्याबाट बचाउँछ ।
हर्रोको चूर्ण कालो नुनसँग मिलाएर खाँदा कफ निको हुन्छ । त्यस्तै, हर्रोले अनावश्यक बान्ता आउनबाट पनि रोक्छ ।
बर्रो कब्जियतका लागि एकदमै उपयोगी हुन्छ ।
दाँत वा गिजासम्बन्धी रोगको औषधि बर्रोको फलबाट बनाइन्छ ।
बर्रोको बियाँबाट निकालिएको तेल छालाको रोगका लागि उपयोगी हुन्छ ।
बर्रोको फल दम र खोकीका बिरामीका लागि लाभदायी हुन्छ ।
बर्रोले मूत्रजलनलगायत मूत्रसम्बन्धी विकार हटाउन मद्दत गर्छ ।
चिसो पानीमा बर्रोको चूर्ण भिजाइएको पानीले बिहान उठेर आँखा धोएमा आँखाको ज्योति बढ्छ । त्यस्तै, आँखाको रातोपन, आँखा सुन्निएको र आँखा पोल्ने समस्या पनि ठीक हुन्छ ।
बर्रोको तेलले कपाललाई फाइदा पुर्‍याउँछ । त्यसैगरी, कानसम्बन्धी समस्याका लागि पनि यो उपयोगी छ ।
यदी साझा पार्टीले सरकारमा आउनु परेमा देशभरका सबै कर्मचारी युनियन खारेज गर्छ : रवीन्द्र मिश्र
आफ्नै श्रीमती परपुरुष सँग मिलेर श्रीमानको हत्या !
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली शनिबार न्यूयोर्क जाँदै
६ः१९ बजे बिहानै गोरखामा भुकम्पको धक्का !
आज साँझको समयमा मौसम बदली भई केहीठाउमा पानी पर्ने सम्भावना-मौसमबिद
भारतिय पुर्व मन्त्रीनै यौ*न सोषणको आरोपमा पक्राउ
संविधान दिवसकै दिन प्रचण्डले संविधान बिपरित चलखेलगर्ने गर्नेलाई चेतावनी दिए !
के नेपालले फेरी अर्को संयुक्त जनआन्दोलनको पर्खाइ गरेकै हो त ? किन देशमा शान्ति सँगै विकासमा स्थास्थायित्व नभएको ?